Manana ny dika mitovin’ny « Saint Suaire» - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ratololojanahary Rija il y a 8 années
Tranom-bakoky ny finoana ny paroasy Kristy Mpanjaka Manjakaray ankoatra ny maha toeram-pivavahana azy. Zavatra maro no azo tsidihina eo anivon’ity fiangonana ity ka voalohany amin’izany ny misterin’ilay sarin’olona eo amin’ny Saint Suaire, ilay lamba voalaza fa namonosana an’i Jesoa tao am-pasana. Ny taona 1998 no tonga avy any Italie io dika mitovy io izay nentina indrindra hanentanana ny kristianina hanamafy ny finoany an’i Kristy, ilay zanak’Andriamanitra nombohana nefa nitsangan-ko velona. “Ny fahalalana ny tantaran’ny Saint Suaire dia manampy ny olona handini-tena manolona ny fijaliana nentin’I Jesoa ary mba hanana fitondran-tena mendrika manoloana izany fijaliana izany” hoy Michel Ratiarison, filohan’ny filan-kevitry ny fiangonana. Misokatra ho an’ny rehetra moa ny fitsidihana ity “vakoka masina” ity ary tsy anavahana antokom-pinoana. Azo anaovana fisintahana masina ihany koa eny an-toerana ary efa maro ny fikambanan-drelijiozy nandinika ny fahasoavan’Andriamanitra teny. Ankoatra izay, mampiavaka ny Paroasy Manjakaray ihany koa ny fananany fitaratra miloko lehibe (vitraux) mitantara ny lalan’ny hazofijaliana sy maneho sarin’olomasina maromaro. Eo ihany koa ny mbola fananany sary hosodoko lehibe maromaro izay mandravaka ny paroasy. Ary farany, mbola hita ao am-piangonana ihany koa ny “orgue hydraulique” izay isan’ny zava-maneno antitra indrindra fampiasa any am-paingonana.
Ny momba ny paroasy
Ny taona 1933 no tonga voalohany tao Manjakaray ny finoana katolika izay nentin’ny fikambanan-dry Masera Frranciscaines. Fampianarana katesizy sy fiaraha-mivavaka no niaingan’izy ireo tamin’izany. Tapaka nandritra ny fivorian’ny kristianina ny 13 okitobra 1935 kosa fa hangataka fahazoan-dalana any amin’ny Eveka hanorina fiangonana izy ireo. Noraketina tamin’io taona io ihany koa ny fividianana ny tany. Nanomboka ny asa fanorena ny 8 marsa 1939 rehefa nahazo ny fankatoavan’i Mgr Etienne FOURCADIER. Naharitra roa taona ny asa ka ny 25 mey 1941 no notokanana ny trano fiangonana. Ho fahatsiraovana an’i Mamera Christ-Roi, fransiskanina nafana fo tamin’ny fanabeazana ara-panahy, dia tapaka fa i Kristy Mpanjaka no mpiaro ny fiangonana.Voatery narodana tanteraka kosa ny fiangonana ny taona 1954 noho ny faharavan’ny rindrina. Voaharina tanteraka ny fiangonana ny 26 okitobra 1958 ary ny taona 1982 no tafatsangana ny tilikambo mirefy 32 metatra. Notendren’ny Cardinal Armand Gaétan Razafindratandra ho paroasy ny fiangonana Kristy Mpanjaka Manjakaray ny 22 novambra 1998.
Misy kristianina 15 000 eo anivon’ny paroasy ary ezaka lehibe tanterahin’ny mpitantana ny hampiombona ny kristianina. Nisy araka izany ary mbola ho tohizana ny fitsangantsanganana iombonana sy ny fifadian-kanina miaraka. Olana kosa ho an’ny fiangonana ny tsy fahampian’ny mpampianatra katesizy. Sivifolo fotsiny ny mpampianatra raha toa ka roa arivo ireo mpianatra.
Hafatra avy amin’ny filan-kevitry ny fiangonana (...)
Hitanao ao amin'ny gazety Lakroan°3868 azonao jifaina ny tohiny. Misaotra.